Qiimaha Our way isbadali ku xiran tahay arrimo kale oo suuqa sahayda iyo. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha updated ka dib markii shirkadda, nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
Si yaryar oo waa la aqbalaa, MOQ waa kumbiyuutarada kaliya 4.
Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag bixinta. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay lacagtaada, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Waxaad samayn kartaa lacag bixinta si ay u akoonka bangiga our.
Waxaan damaanad qalab iyo sanco our. Waxaa naga go'an waa in aad ku qanacsan tahay la waxyaabaha our. In damaanad ama aan, waa dhaqanka ee shirkadda our si wax looga qabto iyo xalliyo arrimaha macaamiisha oo dhan inay ku qanacsan tahay qof walba. siyaasadda guud waa uu nool yahay tayada wax soo saarka iyo 18 bilood daahan.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalaan baakada dhoofinta tayo sare leh. Baakadaha Specialist iyo shuruudaha lagu cabayn aan caadiga ahayn la kulmeyso laga yaabaa in lacag dheeraad ah.
kharashka maraakiibta waxay ku xiran tahay sida aad doorato in aad hesho alaabta. Express sida caadiga ah waa ugu dhaqsiyaha badnaa, laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. By xamuulka badda waa xalka ugu fiican xaddi weyn. Sida saxda ah heerka xamuulka waxaannu kugu siin karaa oo kaliya haddii aan ogaan faahfaahinta caga, lacagta, miisaanka iyo jidka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
CAS Market, Shanghai, Shiinaha